ICielomoto, ukuzamazama komhlaba emoyeni Kuyini lokho? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMonica sanchez | | Izimo zezulu, Izithombe
Isithombe esivela ku-aliforniamedios.com
Ukuzamazama komhlaba sekuvele kumangaze wonke umuntu osendaweni, kodwa lokho okwenzeka emoyeni kumangalisa nakakhulu. Futhi yilokho, cabanga ukuthi uhamba ngokuthula, bese uqala ukubona okuthile okungajwayelekile. Kulokho, ubheka phezulu esibhakabhakeni bese ubona okuthile okuxakile, okudalayo kuduma kakhulu futhi kungadala nokuzamazama. Ungazizwa kanjani?
Lo mkhuba waziwa ngegama le- isithuthuthu esibhakabhakeni, Skyquake noma Skyquake. Yize kungekusha, ososayensi kuze kube manje abakwazanga ukunikeza incazelo enengqondo yokuthi yakha kanjani nokuthi kungani yakhiwa kanjani.
Isibhakabhaka kungakhiwa noma kuphi emhlabeni, kodwa e-United States, eNingizimu Melika nase-Australia babe ngabokugcina ukuyibona. Izakhamizi ezazilele ngokuthula, futhi ezingazelele zaqala ukuzwa umsindo owenza ukuthi amafasitela amafasitela anyakaze. Noma ngubani angacabanga ukuthi kwakuwukuqala kwe-Armagedoni noma ukuphela komhlaba. Futhi empeleni, kujwayelekile ukuthi abantu abakubonile ukubhala imibono ye-alamu kumaphrofayli abo ezinkundleni zokuxhumana. Kepha iqiniso yilokho akukho okumele ukhathazeke ngakho.
1 Yini Ebangela Isibhakabhaka?
3 Amacala adumile e-cielomotos
Yini Ebangela Isibhakabhaka?
Njengoba sishilo, akukabikho mbono owodwa ochaza lo mkhuba. Manje, uma uhlala noma kade uhlala esifundeni esisogwini isikhashana, kungenzeka ukuthi uzwile amagagasi eshayeka emaweni. Yebo, kuvela ukuthi umsindo onamandla owenzayo kungenzeka kungenxa yemethane ekhishwe ngamakristalu avela phansi olwandle. Ngomlilo, lokhu kuwugesi ongakhipha umsindo omkhulu.
Ukulandela amagagasi, ama-surfers avame ukukusho lokho bezwe imisindo ephezulu kakhulu ngenkathi ngizijwayeza lo mdlalo. Ngisho nama-tsunami angahambisana nalo msindo omangalisayo.
Eminye imibono ithi izinkanyiso ezisemkhathini zingakhiqizwa ngu:
izindiza eziphezulu ephula isithiyo somsindo
un meteorite lokho kuqhume emkhathini
Noma kunjalo, yonke le mibono akukwazanga ukuboniswa. Kuyiqiniso ukuthi izimbungulu zesibhakabhaka ziyenzeka ezifundeni ezisogwini, kepha azivele zivele lapho; Ngakolunye uhlangothi, ochwepheshe bezindiza ezingaphezulu kwamandla abo bayaphika ukuthi umsindo wesibhakabhaka uyafana nalowo wezimoto ezibalwe ngenhla. Futhi, endabeni yama-meteorite, lawa matshe aqhamuka emkhathini lapho engena emkhathini ashiya ngemuva ukukhanya okukhanyayo, okuzoba kukhanya ngokwengeziwe kuba kukhulu. Isibhakabhaka asikhiphi noma yiluphi uhlobo lokukhanya.
Ngakho-ke, incazelo yesayensi eyamukelwa kabanzi yilokho okushoyo lapho izingqimba zomoya oshisayo nobandayo zihlangana zakha ukuqhuma, Ngaleyo ndlela kubanga umsindo ongeke uwukhohlwe kalula. Kakhulu, ukuthi kujwayelekile ukuthi abantu badinge ukunakekelwa ngudokotela ngenxa yekhanda elibuhlungu, isisu esibuhlungu noma ezinye izinkinga ezincane.
Isithombe esivela ku- supercurioso.com
Kuyinto engavamile kakhulu, kodwa cha, akuyona into entsha. Kumele kube ubufakazi bokuthi babekhona kusukela ngenyanga ka Februwari 1829. Ngaleso sikhathi, iqembu lezifiki eNew South Wales (e-Australia) labhala ohlwini lwazo lokuhamba: 'Cishe ngo-3 ntambama, mina noMnu Hume sasibhala incwadi phansi. Usuku belube luhle ngokumangazayo, ngaphandle kwefu esibhakabhakeni noma umoya omncane. Ngokushesha sezwa okwakubonakala kungukuqhunyiswa kwenganono ebangeni lamamayela amahlanu kuya kwayisithupha. Kwakungewona umsindo oyize wokuqhuma kwasemhlabeni, noma umsindo owenziwa isihlahla esiwayo, kodwa umsindo wakudala wocezu lwezikhali. (…) Enye yalawo madoda yakhwela esihlahleni, kodwa yangabona lutho olujwayelekile.
Kunoma yiliphi izwekazi kwake kwabonakala. E-Ireland, ngokwesibonelo, zivame kakhulu, ngakho-ke sikhuluma ngesimo esikhona ngempela, kepha esingazi okuningi ngaso. Ngawo-70, ama-skylines aba yinkinga enzima kakhulu eMelika kangangokuba uMongameli uJimmy Carter wayala a uphenyo olusemthethweni ngalolu daba. Ngeshwa, akakwazanga ukuthola imvelaphi yesibhakabhaka.
Amacala adumile e-cielomotos
Ngaphezu kwalokhu okushiwo, kukhona amanye amacala adumile:
Eminyakeni embalwa edlule, ngo-2010, kwabikwa isithuthuthu esibhakabhakeni e-Uruguay. Ngokuqondile, kwakungoFebhuwari 15 ngo-5 ekuseni (isikhathi se-GMT). Kubangele, ngaphezu komsindo, ukuzamazama edolobheni.
Ngo-20 Okthoba 2006, amadolobha aphakathi kweCornwall neDevon, e-UK, athi "ukuqhuma okuyindida" kudale umonakalo ezindlini.
NgoJanuwari 12, 2004, esinye salezi zenzakalo sazamazamisa iDover (iDelaware).
NgoFebhuwari 9, 1994, elinye lazwakala ePittsburgh (e-United States).
Njengoba zingatholakali okwamanje, kuzofanele senze njalo yiba nesineke bese ulinda ukubona ukuthi okulandelayo kuzokwenzeka nini futhi kuphi. Kwazi bani, mhlawumbe kwenzeka eduze kunalokho ucabanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » ICielomoto, ukuzamazama komhlaba emoyeni
ULourdes Beatriz Cabrera Mendez kusho
Izolo ebusuku, lokho kungu ... Mashi 23, 2016, ngo-23.30: 2010 ebusuku ngesikhathi sase-Uruguay, edolobheni laseMontevideo, ngokunembile endaweni ebizwa ngeSanta Catalina, esemngceleni wegquma laseMontevideo, kwenzeka ingozi yezulu. Ngiyakuqonda ukuthi sekwenzekile vele, ngo-2011, XNUMX manje kulokhu. Omakhelwane bezwa umsindo omkhulu kangaka, futhi bezwa ukuthi izindlu zabo ziyazamazama, bacabanga ngesitshalo esiseduze sokubuyisela kabusha ... kepha asisebenzi.
Phendula uLourdes Beatriz Cabrera Mendez
U-Angela Maria Ortiz kusho
Ekuseni ngovivi ngoMashi 30, 2016. EBuenaventura - Valle del Cauca. Kwakunokuthile okuhambisana nesiphepho sikagesi, ukucima kukagesi kanye nokulimala kwengaphandle lendlu. Angikaze ngiyizwe into enjengale. Kwakungathi ngisenkabeni yesiphepho. Umsindo owedlulele
Phendula u-Angela Maria Ortiz
UmKristu montenegro kusho
Ngo-7: 54 am ngoLwesibili Juni 14, 2016 Pacasmayo - Peru. imisindo emikhulu, sengathi iloli yokulahla inhlamvu ibiphonsa amatshe, kuzwakala amawindi ezindlu, konke bekushesha kakhulu kepha ngokuqinisekile okungaphezu koyedwa kuthuse
Phendula ku-Cristián montenegro
Izolo, ngoNovemba 24, 2016, kuzwakale ukuzamazama komhlaba futhi eminyangweni emibili yase-Uruguay. Ngo-21: 00 kusihlwa eCanelones naseMontevideo bathi bekufana nokuqhuma okukhulu nokubonakala kokukhanya, lezi zimo sezijwayeleke kakhulu lapha.
UMohesa Hernandez kusho
Kuzwakale ubusuku obubili eCórdoba Veracruz ngoJanuwari 19 no-20, 2017
Phendula uMohesa Hernández
ULiliana Leiva Jorquera kusho
Izolo, Agasti 17, 2017, cishe ngabo-08: 30, esifundeni sase-Araucania. I-Chile, into enezici ezifanayo yahlangatshezwa.
Phendula uLiliana Leiva Jorquera
santiago athens moreno kusho
Kuyathakazelisa kakhulu, icala lamalambu esibhakabhaka kufanele lifundwe kangcono
Phendula ku-santiago atenas moreno
U-Aki, esifundazweni sasePuebla, eTlapanala, uhlangabezane ne-skybill oi ngoJanuwari 5, 2018 kuze kuse, ngoJanuwari 6
Lo mcimbi wenzeke namuhla, ngoLwesine, ngoFebhuwari 27, 2020 ngo-02, edolobheni laseBahía de Caráquez, e-Ecuador.
Kuzwakale umsindo onamandla esibhakabhakeni, kube sengathi kuqhume ukuqhuma, futhi yize kungekho mnyakazo obonwa phansi (okusinike ukuzola lapho kuzamazama umhlaba), amafasitela nezicabha bekuzamazama.